Tag: hyperlocal | Martech Zone
Proximity Kushambadzira uye Kushambadzira: Iyo Technology uye Tactics
Chishanu, February 5, 2021 Mugovera, March 6, 2021 Douglas Karr
Pandinongopinda muketani yangu yeKroger (supamaketi), ndinotarisa pasi pafoni yangu uye iyo app inondizivisa kwandinogona kuburitsa yangu Kroger Savings barcode yekutarisa kana kuti ndinogona kuvhura iyo app kuti nditsvage nditsvage zvinhu mukati nzira. Pandinoshanyira chitoro cheVerizon, yangu app inondinyevera ine chinongedzo kutarisa-ndisati ndatombobuda mumotokari. Izvi zviviri
NeChishanu, Gunyana 19, 2014 NeChishanu, Gunyana 19, 2014 Nathan Chandra
Makambani ezvitoro ari kukwikwidzana nemakomputa ekutengesa epamhepo seAmazon neZappos. Zvitoro zvezvitina-uye-dhaka zvitoro zvakanangana nekupa chakanakisa chiitiko kune vatengi vadzo. Tsoka dzetsoka chiyero chekukurudzira kwevatengi uye kufarira (nei munhu wacho akasarudza kuuya kuchitoro kuzotenga kana sarudzo yekutenga online iripo). Makwikwi mukana wekuti chero mutengesi ane pamusoro pechitoro chepamhepo ndechekuti mutengi ari padyo uye akagadzirira kuita
Nei Walmart Inofanirwa Kubhadhara paHyperlocal Yemagariro
China, Gunyana 20, 2012 China, Gunyana 20, 2012 Douglas Karr
Recommend.ly apedza ongororo yezano rakakundikana neWalmart yekuvandudza mapeji epaFacebook enzvimbo imwe neimwe yenzvimbo dzayo mazana matatu nemazana mashanu. Heino mhedzisiro yakaitwa naCommend.ly: Walmart inoita kunge iine zano rezvinyorwa zvinosanganisira kutumira mutemo panzvimbo. Nekudaro, hazvisi pachena kuti vane zvibodzwa-zvezvitoro zvekutora kana kutora vateveri. Zvirinani, hapana zvinoita kunge chiri kushanda nazvino. Imwe yekucherechedza ndeye kushandiswa kweyakaisirwa mukati mehukama zano. Ichi chi
WordPress: Manage Ads neAd-minister
Muvhuro, June 9, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pese nguva pandinoyedza zvimwe kushambadza pane yangu saiti, ini ndaigara ndichifanirwa kusvika kune iyo dhizaini dhizaini uye kugadzirisa iyo yepakati iwo kodhi ... chimwe chinhu chinondipa kakutya. Ndakaedza akati wandei ekushambadzira plugins kune yangu WordPress blog, asi hapana imwe yadzo yaive yakasimba zvakakwana. Vhiki rino ini ndakazopedzisira ndawana zvandaida neakanakisa WordPress kushambadzira manejimendi plugin, inonzi Ad-minister. Iyo interface yeAd-minister haina kunyanyisa kujeka, asi